Nisy ny fivoriamben`ny OMC (Organe mixte de conception) izay notarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian teny amin`ny lapan`i Mahazoarivo, omaly. 28 janvier 2021
Nodinihina nandritra ny fivoriana omaly ihany koa ny lafim-piainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao, ka nojerena manokana ny mikasika ny rano sy ny jiro. Nambaran’ny Praiminisitra fa manaraka ny toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, ny amin’ny tsy tokony hisian’ny fiakaran’ireo, ny “OMC”. Notsipihiny fa mbola misy fiantraikany eo amin’ny vahoaka ny ady natao tamin’ny valanaretina covid-19, ka tokony tena hotandrovana ny tombontsoan’ny mpanjifa. Noho izany dia, na efa hita aza ny ezaka eo amin’ny fanatsarana ny fotodrafitrasa hampitombona ny famatsian-drano eo anivon’ny Jirama, dia tokony hojeren’ny tompon’andraikitra ao avokoa ny olana mety mahatonga ny tsy fahatomombanana, eny hatramin’izay mety ho fikasana hanakorontana, mba hahafahan’izy ireo manarina ny tsy mety rehetra sy manatsara ny kalitaon’ny tolotra ary mampahafantatra izany amin’ny vahoaka.
Tsy azo ekena ny fanimbana fananana iombonana
Voaresaka nandritra ny fivoriana omaly ny tranga miseho eny amin’ny oniversite. Misy fandraisan’andraikitra takina amin’ireo tompon’andraikitry ny oniversite satria tsy azo ekena ny fanimbana fotodrafitrasa sy fananana iombonana raha toa ka misy ny fitakiana ataon’ny mpianatra, na inona na inona anton’izany, hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian. Nomarihiny fa vonona ny hanome tanana amin’ny fiarovana ny oniversite ireo mpitandro filaminana, ka nentaniny ny hisian’ny fiaraha-miasa ara-potoana mba hisorohana ny mety ho korontana.
Olana eo amin’ny minisiteran’ny fahasalamana